भारतमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढ्दो - Everest Dainik - News from Nepal
भारतमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढ्दो
काठमाडौंः भारतमा लगातार कोरोना संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन् । त्यहाँ दैनिक १५ देखि २० हजार संक्रमित बढिरहँदा २ देखि ४ सय जनाको मृत्यु भइरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा सोमबार १८ हजार ३३९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ४१७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा कोरोना संक्रमित ११ हजार नाघे, करिब ४ सय को मृत्यु
भारतमा आइतबार १९ हजार ६२० हजार संक्रमित थपिएका थिए भने ३८४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मको तथ्याङकअनुसार भारतमा संक्रमित संख्या ५ लाख ६७ हजार ५३६ पुगेको छ भने १६ हजार ९०४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस मलेसियामा थप ९ नेपालीमा कोरोना संक्रमण
त्यहाँ संक्रमितसँगै निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । संक्रमितमध्ये ३ लाख ३५ हजार बढी निको भइसकेका छन् । २ लाख १५ हजारको उपचार जारी हुँदा ९ हजारको अवस्था गम्भीर छ ।
कुन प्रदेशमा कति ?
भारतको महाराष्ट्र सबैभन्दा पीडित बनेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चीनबाट ल्याइयो साढे आठ करोडका स्वास्थ्य सामग्री, के के छन् ?
ट्याग्स: काेराेना भाइरस, भारत, स्वास्थ्य मन्त्रालय